4 Atụmatụ Ịzụ ahịa Ahịa Dị Mkpa Iji Mee Ka Ọdịdị Gị rụọ ọrụ - Nchegbu Ọkachamara Ọkachamara
Ahịa ahia gụnyere mgbasa ozi email, SEO, mgbasa ozi n'ịntanetị, mgbasa ozi mmekọrịtana mkpokọta weebụ. Nke a na-enye ndị na-azụ ahịa ahịa obodo nsogbu, bụ ndị na-achọ ịdọrọ anya na saịtị ha. Dịkarị, ndị andị ọchụnta ego na-arụsi ọrụ ike n'ichepụta ahịa kachasị mma maka azụmahịa ha.
N'ihe a, Nik Chaykovskiy, onye isi ahịa ndị na-azụ ahịa nke Ọkachamara ,elaborates na mkpa dijitalụ ahịa azum na ọ bụla azụmahịa nwere ike ịmụta na 2017. Obodo azụmahịa nwe dị ka ọka iwu, dentists,ndị dọkịta, na ndị ọrụ nchịkọtaghachi ga-achọta atụmatụ ndị bara uru.
1 - asp.net web host. Buru n'uche, gị na saịtị ahụ bụ convertible "mustang".
Akụkụ ọ bụla nke ahịa dijitalụ ga-ebugharịrị ịntanetị SEOụlọ ọrụ azụmahịa. A ghaghị ile nke a dị oke mkpa. Ejiri ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ na-emepụta ihe na-enweghị mmasị nke pụtara na ha bụọ na-esiri gị ike ịnyagharịa na ngwaọrụ ndị dị ka mobile ma dị iche. Nnyocha na-egosi na ihe karịrị pasent 43 nke azụmahịa ndị ahịa na-esi na mobilengwaọrụ na onu ogugu atumatu ka iwelie. N'ihi ya, saịtị azụmahịa ga-adọrọ mmasị na ịnweta ngwa ngwa ngwa. Ndị ọbịakwesịrị inwe ike ịpị adreesị ozi-e ma ọ bụ nọmba ekwentị iji kpọtụrụ onye nwe ụlọ ahịa ma ọ bụ njikwa. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ndị ahịa nwereiji dee aha kọntaktị ahụ, mgbe ahụ ụlọ ọrụ ga-atụfu ha na ndị asọmpi na saịtị ndị kachasị anya. Ya mere, echiche ahụ,bụ ịmegharị ndị ọbịa ka ha rie email, oku ekwentị ma ọ bụ ije ije.
2. Ibu "azịza bara ọgaranya" na weebụsaịtị.
Ndị mmadụ na-agbanwezi ugbu a ha si eji Google eme ihe. Ndị ọbịa agaghịzi achọleba anya maka ozi ma choro Google iji zaa ajụjụ ha. Dị ka ụlọ ọrụ, Google etinyela aka na ohere a site n'ịmepụta ya"azịza bara ụba" ya nyocha algorithm ma melite ahụmahụ SEO. Nke a na-enye nsonaazụ ziri ezi karị. Na nke a, azụmahịa ọ bụlaonye nwe nwere ajụjụ ndị ha na-ajụkarị site na ndị ahịa. Ya mere, ọ ga-abụ ihe magburu onwe ya ịmepụta azịza bara ọgaranya na ebe nrụọrụ weebụnke mere ka ha pụta mgbe a jụrụ Google ajụjụ.
3. Jiri usoro mgbasa ozi na-eji akọ eme ihe.
O doro anya na ihe ka n'ọnụ ọgụgụ azụmahịa na-emegidesi ike mgbe ị na-ahọrọ na ọhụụiji mee ihe na otu esi etinye ọkwa. Otu iwu dị mkpa bụ ịghọta onye ahịa gị. Mgbasa mgbasa ozi abụghị echiche ọhụrụ. Ikwusindị ahịa gị, na-amalite na ndị ọkachamara mgbasa ozi ndị ọzọ. Ọzọkwa, ịkọ na mgbasa ozi ọha na eze bụ nanị ịmepụta olu maka azụmahịa naTụkwasị n'ịgwa ndị ahịa na-eguzosi ike n'ihe okwu. N'ihi ya, onye na-azụ ahịa kwesịrị ịkpachara anya ka ị ghara ịbudata saịtị ahụ na nkwalite na ọpụrụiche.
4. Nọgide na-elekwasị anya n'ahịa ahịa.
Afọ ole na ole gara aga, a na-etinye aka na ahịa ahịa iji wepụta ụzọ maka mmekọrịta mmadụ na ibe yaahịa mgbasa ozi. Otú ọ dị, n'ihi ọtụtụ azụmahịa ndị obodo, ahịa email bụ ụzọ dị ala ma dị egwu maka ịkọrọ ndị ahịa. Instagramna Facebook gosipụtara naanị pasent nke ụmụazụ. Ha na-achọ ka mmadụ kwụọ ụgwọ iji ruo ọtụtụ mmadụ. Onye na-ere ahịa nwere ike izipu ihe nchịkọta ọhụrụ,ozi ihe omuma na ihe puru iche site na iji email. Iji MailChimp enyere onye nwe ahia aka iziga ozi gaa na kọntaktị 2,000uzo ahia ahia.
N'ikpeazụ, ndị na-azụ ahịa n'ógbè ahụ kwesịrị ileba anya azụ ahịa ha mgbe niileweebụsaịtị iji hụ na ozi kọntaktị bụ ọrụ. Enwere ike imezi usoro ahia ahia di iche iche iji kpoo ahiasaịtị.